Induction kugadzira michina | induction kupisa muchina mugadziri | induction kudziya mhinduro
Induction yekugadzira midziyo
chii chinonzi induction kuumba?
Induction forging inoshandisa induction kupisa simbi zvikamu zvisati zvaumbwa, kana 'kuremara' nemadhindaini kana sando.
Induction forging ine zvinyorwa zvinokosha zvakapfuura furnace forging. Ikukurumidza uye kutarisa kwekugadziriswa kunogadzirisa kubuda kwepamusoro. Induction inoderedzawo kusvibiswa uye inobatsira kuchengeta metallurgical kutendeseka. Uye sezvo kuburitsa kunopisa zvakananga, kupisa kunzvimbo, inochengetedza simba. Kubatana nekudzokorora kwekugadziriswa kunoita kuti zvive zvakanaka zvekubatanidza mumiganhu yekuzvigadzira yakagadzirwa.
Induction forging inoshandiswa zvakanyanya mumashandi esimbi neshesari kupisa mabheti, mabhairi uye bhero zvinoguma. Metare inowanzovakirwa ne DaWei Induction Heating systems inosanganisira aluminium, ndarira, mhangura, simbi uye simbi isina chinhu.
Mhuri mitatu DaWei Induction Kutengesa zvombo inogona kushandiswa pakugadzira maitiro: DW-MF mutsara, KGPS mutsara. Zvisinei, DW-MF induction inogadzira furimi inosanganisira mienzaniso yakasiyana-siyana inonyanya kugadzirirwa kukwirira-kutengesa mabheti, mabhadhi, mabhodhi, mabhero, mabhoti uye zvisati zvaitwa.
Categories FAQ Tags Kubatsira kwekugadziriswa kwekugadzira, induction forging, Induction yekugadzira midziyo, chii chinonzi induction inging, nei uchisarudza kubhadhara tsvimbo kana mabheti nekutorwa